Iforam yesiLatin yaseMelika kwiingcingo eziphawulekayo zokungenelela kwee-Urban - Geofumadas
NgoJanuwari, 2013 Ukufundisa i-CAD / GIS, UkuCwangciswa kweziThili
Inkqubo yeLatin America kunye neCaribbean yeLincoln Institute for Policies Policy yichaza le forum ebalulekileyo, eya kubanjelwa eQuito, e-Ecuador. 5 ku-10 kaMeyi we-2013.
Ehlelwe ngokubambisana neBhanki yeSizwe yaseRiphabhlikhi yase-Ecuador, ijolise ekusasazeni, ukwabelana kunye nokuvavanya isethi yezixhobo eziphawulekayo zokungenelela kwidolophu eziphuhlisiwe kwaye ziphunyezwe ngempumelelo kwiidolophu zaseLatin America. Yisixhobo sezinto ze-20, ezinye zazo aziwayo kwaye zikhethwe phantsi kweemfuno ezichaphazelekayo ukuchaphazela imiba ephambili, ukuhlaziywa kovavanyo oluchanekileyo kunye nokukwazi ukuchazwa kwamanye amagunya ommandla.
Eyona yokuqala eli phulo kukusekwa ngobukho (kunye nokuphunyezwa ngempumelelo) izixhobo ezichaphazela imiba ebalulekileyo kwi-ajenda karhulumente ezidolophini kule ngingqi. Okubaluleke kakhulu, ezinye zezi zixhobo ayisoloko bazi abacwangcisi ezidolophini (okanye abenzi bezigqibo ngokubanzi), umzekelo, izatifikethi ze Potential Construction Olongezelelweyo (CEPAC), esetyenziswa ngempumelelo São Paulo. Ezinye izixhobo ezibalulekileyo ngokulinganayo, nangona baziwa ngcono, ngaba mhlawumbi singaqondanga atyhale 4 nokuba ucalucalulo okanye olungelulo malunga iimeko eziphathekayo wokuphunyezwa kwayo, njengoko kuboniswe kakuhle ngenxa yagalelo uphuculo.
izixhobo zomthetho, yezemali kunye zolawulo echaphazela regularization kunye titling umhlaba uya zihlalutywe, amalungelo uphuhliso, yokwahlulwa umdla ekuhlaleni, ulawulo ixabiso lezakhiwo, ukusetyenziswa kweenkqubo zolwazi lobume, ukuphuculwa kubumelwane, i amanyathelo abucala kuphuhliso lwasedolophini, ukufumana uluntu komhlaba, irhafu yepropati nozinzo notshintsho kusetyenziso lomhlaba, phakathi kwabanye.
ISigqeba sidibanisa iintetho ngeentetho eziphathekayo kwizixhobo, zilandelwa zifundo ezincinci zinikezelwa ngexesha elifanayo, ukwenzela ukuba abathathi-nxaxheba abanomdla banethuba lokunyusa iinkalo zemfundo kunye nokusebenza kwesixhobo ngasinye. Zomibini iinkomfa kunye nezifundo ze-mini ziya kufundiswa yiinkampani zaseLatin American zineenkcukacha eziqaphelekileyo kwiinkqubo zokungenelela ezicetywayo zasezidolophini.
Lo msebenzi ijolise nabasemagunyeni, amagosa kunye namagcisa ngoorhulumente Latin American wengingqi, wenqila nowesizwe inxaxheba ekuqulunqweni kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zongenelelo ngoncedo kunye nokulawulwa nkqubo komhlaba, kwakunye nabahlohli yunivesithi kunye namagcisa asuka kwimibutho hayi urhulumente, nenzala kunye nobuchule kwi imixholo qonga.
Phakathi kwezihloko eziza kuxutyushwa ngazo:
Ukufunyanwa komhlaba ngokusebenzisa izithuthi kunye neendlela zokulawula
Ukubuyiswa kweenzuzo ezinkulu kwiimpahla zokwakha
Ukuhlanganiswa kwentlalo yoluntu
Ukukwazisa uluntu amalungelo omhlaba
Izenzo zokuthintela ukusabalalisa
Ukubonelelwa komhlaba kwizindlu zentlalo5
Amanyathelo ngoncedo lwabucala
Ezinye iirhafu zerhafu
Ukuxhatshazwa kwendawo yokwenza iindawo zentlalo zentlalo zisebenze
Izicelo ze-Intanethi ziya kuvuleka phakathi NgoJanuwari 25 noFebhuwari 18 kwaye kufuneka zenziwe kwiindawo ezimbini. Inxalenye yokuqala yenziwe kwiphepha lekhosi:
IForam yeForam Ingxenye 1
kunye neyesibini kwisixhumanisi esahlukileyo:
IForam yeForam Ingxenye 2
Kufuneka ukuba uzalise zombini iifom kungakhathaliseki ukuba ufuna ukuthatha inxaxheba kwiinkomfa kuphela okanye kwiinkomfa kunye nezifundo ze-mini.
Post edlulileyo«Edlulileyo Okubuyisela i-GEO5 kwinguqulo ye-15
Post Next I-Master of Management loMhlaba UNAHOkulandelayo "